iPhone ဘက်ထရီ အစားထိုး ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ - Hi-Chipcom
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > iPhone ဘက်ထရီ > iPhone ဘက်ထရီ အစားထိုးခြင်း။
Shenzhen Hi-Chipcom Electronics Co., Ltd သည် လီ-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ရောင်းချခြင်းတို့ကို အထူးပြုသည့် ပို့ကုန်ကို ဦးတည်သည့် နည်းပညာမြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2006 ခုနှစ်မှစ၍ Hi-Chipcom သည် ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Shenzhen တွင် လွတ်လပ်သော R&D စင်တာတစ်ခုရှိသည်။ ထုတ်ကုန်သည် ကုန်ချောဘက်ထရီမှ လျှပ်စစ် core ထုတ်လုပ်မှုအထိ တိုးချဲ့သည်။ 2008 ခုနှစ်တွင် Hi-Chipcom သည် အဆင့်မြင့် ပေါ်လီမာ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို မိတ်ဆက်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လီ-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် ၃၆ သန်းကို ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် RoHS, UL နှင့် CE တို့၏ ပို့ကုန်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံသောစွမ်းရည်သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အဆင့်မြင့်သောအဆင့်တွင်ရှိသည်။ Li-Ion ဘက်ထရီကို အဓိကအားဖြင့် ထုတ်လုပ်သည့် Hi-Chipcom ၏ ဝန်ထမ်း 200 ခန့်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များ၏ 60% ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရောင်းချနေပြီး 40% သည် ပြည်ပဈေးကွက်သို့ တင်ပို့လျက်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များကို ဆက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်များ၊ ကြိုးမဲ့ထုတ်ကုန်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များ၊ အီလက်ထရွန်နစ်ပညာပေးထုတ်ကုန်များ၊ အရုပ်ပစ္စည်းများ၊ အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။
ပုံစံ:5s/5se 6G/6S 6P/6SP 7G 7P 8G 8P XR IX-MAX
iPhone55s 5c66s6ပေါင်း77 အပေါင်း 8 8 ပေါင်း X 11 ဘက်ထရီအတွက် OEM ဆဲလ်ဖုန်း မူရင်းစွမ်းရည် အစားထိုး ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘက်ထရီ
သန့်စင်သောဘော့လီပေါ်လီမာသည် Eco-friendly ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
iPhone55S 5C SE66S6Plus 6S Plus77 Plus 8 8 Plus X XS XR XS Max 11 11 Pro 11 Pro Max ဘက်ထရီ
AAA grade အသစ်စက်စက်
အကြိမ် 500 ကျော်
တင်သွင်းထားသည့် Smart IC အကာအကွယ်၊ အားပိုသွင်းခြင်း၊ စွန့်ထုတ်ခြင်း၊ ဗို့အားကျော်ခြင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းများကျော်ခြင်း၊ ဆားကစ်တိုခြင်း၊ အပူချိန်ကာကွယ်ခြင်း
OEM မှာယူမှုကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ အစမ်းမှာယူမှုကိုလည်း လက်ခံပါသည်။
1၊ စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားနှင့်စွမ်းရည်၊ ဝယ်သူ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါသည်။
3၊iPhone မော်ဒယ်အများစုကို ပံ့ပိုးပါ။
၄၊UL1642 ကို စမ်းသပ်မှု စံနှုန်းများအဖြစ် ယူသည်။ နှင့်ထုတ်ကုန်အားလုံးအလိုရှိသည်။l 100% ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်သည်။.
၅၊တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊သံသရာရှည်ပါစေ။င ဆက်တိုက်အားသွင်းခြင်းနှင့် အားပြန်သွင်းခြင်း အကြိမ် 500 ကျော်ကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ဘက်ထရီပမာဏ မနည်းပါ။h80%.
၆၊မြင့်မားသောဘေးကင်းမှု- တပ်ဆင်ပါရှိသော ဆားကစ်အကာအကွယ်ဘုတ်တွင် မီးမရှိ၊ ပေါက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲ ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်း၊ အားပိုလျှံခြင်း၊ ဓာတ်အားလွန်ခြင်း၊ ထိခိုက်မှု၊ တုန်ခါမှု၊ အပ်စိုက်ကုထုံး၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း စသည်ဖြင့် ပါရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 18650 ဘက်ထရီအားလုံးတွင် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော အဆို့ရှင်များ ပါရှိသည်။ နှင့် ပိုလီမာဘက်ထရီဆဲလ်များအားလုံးသည် လွန်ကဲသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်သာ ဖောင်းပွလာပြီး ပေါက်ကွဲမည်မဟုတ်သည့် ကော်လိုဒိုင်းဓာတ်အားကို အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်ကုန်ဘေးကင်းမှုနှင့် အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိသည်။
1၊ သင့်ကုမ္ပဏီအကြောင်း မိတ်ဆက်ပါ။
Hi-chipcom ကုမ္ပဏီကို 2003 ခုနှစ်တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လီသီယမ်ဘက်ထရီ အပလီကေးရှင်းနှင့် ဘက်ထရီအချောထည်များကို သုတေသနနှင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် 18 နှစ်ကြာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်၊ Weihai၊ Shandong တွင် အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်းကို လစဉ် ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ ၃ သန်းဖြင့် စတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားသော စမ်းသပ်ကိရိယာများသည် ဘေးကင်းရေးဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် တူညီသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သည့် ဘက်ထရီများသည် နိုင်ငံအားလုံးကို ကျော်ဖြတ်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဘေးကင်းရေး စမ်းသပ်ခြင်း ၊ ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက ခံယူချက်မှာ ဖောက်သည်များအတွက် တန်ဖိုးဖန်တီးရန် အလုံခြုံဆုံး ဘက်ထရီကို ပြုလုပ်ရန်။
2၊ ကုမ္ပဏီက ဘယ်ဘက်ထရီ အမျိုးအစားကို လုပ်တာလဲ။
ဘက်ထရီပုံသဏ္ဍာန်အရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းအား 18650 ဆလင်ဒါဘက်ထရီများနှင့် ပျော့ပျောင်းထုပ်ပိုးထားသော ပိုလီမာဘက်ထရီများအဖြစ် ပိုင်းခြားလေ့ရှိပါသည်။ ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည်အရ၊ ၎င်းတို့ကို ပါဝါဘက်ထရီ အများအပြားနှင့် သာမန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘက်ထရီများအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။
3၊ oem/odm အော်ဒါရပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Shenzhen၊ China တွင်တည်ရှိသောပရော်ဖက်ရှင်နယ် OEM & ODM ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝယ်သူ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ သင်နှစ်သက်သောအချိန်မရွေး ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့လာရောက်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။
4၊ အရည်အသွေးကော ဘယ်လိုလဲ။
အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် တင်းကျပ်သော QC စနစ်ရှိသည်၊ သင်္ဘောမတင်မီတွင် ဘက်ထရီတိုင်းကို ဘေးကင်းစွာ စမ်းသပ်ထားကြောင်း ကတိပြုနိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝယ်ယူသူများကို အာမခံ ၁ နှစ်ပေးပါသည်။
DHL UPS TNT FEDEX EMS ကဲ့သို့သော စံတင်ရေကြောင်းပို့ဆောင်မှု စသည်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ရနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်သူသည် အထူးရေကြောင်းတောင်းဆိုမှုများရှိပါက၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်း လက်ခံနိုင်သည်။
6၊ အထုပ်ကော ဘယ်လိုလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စံသတ်မှတ်ချက်သည် အဖြူရောင်သေတ္တာနှင့် ပုံးပုံးဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်ယူသူများအတွက်လည်း စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
7၊ အဲဒီ အောင်လက်မှတ်တွေက ဘာတွေလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီများသည် စစ်ဆေးမှုအားလုံးနှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း ကတိပြုနိုင်ပြီး လိုအပ်သည့်အခါ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
8၊ သင့် MOQ ကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ သည် အများအားဖြင့် 100pcs ဖြစ်သော်လည်း မတူညီသောဝယ်သူများအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ moq ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ လိုအပ်ချက်။ ဒါက ညှိနှိုင်းလို့ရတယ်။
hot Tags:: iPhone ဘက်ထရီအစားထိုး၊ စိတ်ကြိုက်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ
iphone ဘက်ထရီစမတ်ဖုန်းဘက်ထရီဆဲလ်ဖုန်းဘက်ထရီစိတ်ကြိုက်ဖုန်းဘက်ထရီiphone အစိတ်အပိုင်းများiphone ဆက်စပ်ပစ္စည်းများiphone ပြုပြင်ခြင်း။
OEM Long Life iPhone 12 Pro ဘက်ထရီ
OEM iPhone 12 Pro အစားထိုး ဘက်ထရီ
OEM Long Life iPhone 12 ဘက်ထရီ
OEM iPhone 12 အစားထိုး ဘက်ထရီ
OEM Long Life iPhone 11 ဘက်ထရီ